ဦးဇော်: Hello..ချစ်ညီမလေးများ What is sexy...????
Hello..ချစ်ညီမလေးများ What is sexy...????
ကျွန်မ သမီးတင် မကပါဘူး...မိန်းကလေးတိုင်းက
ို သိစေချင်ပါတယ်။ "ဆက်စီ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အပေါ်ယံ အရေပြား တစ်ထောက်စာ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လို လူမျိုးလဲ ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ လူတိုင်း အတွက် အဓိပ္ပါယ် တူချင်မှ တူမှာပါ။ ပုံသွင်းသလို တစ်ပုံစံတည်း လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင် ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ ကိုယ်ဆက်စီ ဖြစ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆက်စီဖြစ်လား၊မဖြစ်လား ဆိုတာ တခြားသူက သတ်မှတ်လို့ မရသလို၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံအစွဲတွေ၊ အများအမြင်နဲ့ တခြားဘေးက လွှမ်းမိုးမှုတွေ (ဥပမာ-မီဒီယာ၊ ရုပ်ရှင်)ကဖွင့်ဆိုချက်တွေ အတိုင်းလိုက် လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ဟန်နဲ့သာ နေတာကမှ တကယ်ဆက်စီ ဖြစ်တာပါ။ (ဆိုလိုတာက အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေသလို အတိုအပြတ် ၀တ်မှ၊ ရှေးထုံးစံ ထမီ ဘီးဆံပတ်ကြီးနဲ့ နေမှ ဆက်စီ ဖြစ်တာလို့ ထင်စရာ မလိုပါဘူး) ကျွန်မ သမီးနဲ့ တူမလေးလို အမျိူးသမီး တော်တော်များများက ဆက်စီ ဖြစ်ဖို့ ကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းတတ် ကြပါတယ်။
Posted by ဦးဇော် (သိသမျှ) at 17:03
Candy 8 November 2012 at 19:39
မှတ်သားသွားပါတယ် အစ်ကိုရေ :D